nothing | Saturngod | Page 2
Leaveareply ဒီနှစ် iOS bootcamp လုပ်မှာဖြစ်လို့ ရန်ကုန်ကို ၁ ပတ်လောက် ပြန်ဖြစ်တယ်။ D Form မလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အတွက်ကြောင့် ရန်ကုန် လေဆိပ် အဝင်မှာလည်း ဘယ်နေ့ပြန်မယ်ဆိုတာ ပြောစရာ မလိုသလို သူတို့လည်း မပေးပါဘူး။ တွေ့တွေ့ခြင်း မင်္ဂလာပါလို့ immigration က နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ Arrival Card နဲ့ Passport ပေးလိုက်ပြီးတော့ ခဏနေတော့ ပြန်ပေးပါတယ်။ တော်တော်လေးကို အလုပ်လုပ်တာ မြန်လာတယ်လို့ ဆိုရမယ်။ ကျွန်တော် ပြန်တဲ့ လေယာဉ်မှာတော့ မြန်မာထက် နိုင်ငံခြားသား ပိုများတယ်။ စလုံးက တရုတ်တွေ တော်တော်များတာကို တွေ့ရတယ်။
လေယာဉ်ကွင်းကို နာရီဝက်နောက်ကျမှ လေယာဉ်ဆိုက်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကို မကြာမှီ ဆင်းသက်ပါတော့မယ်ပြောပြီး တော်တော်နဲ့ မဆင်းဘူး။ လေယာဉ်ကွင်းမှာပဲ နေရာ မရှိလို့လား ဒါမှမဟုတ် စောပြီး ကြေငြာမိတာလားတော့ မသိဘူး။ Arrival Card ကို မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလည်း ဖြည့်နေရတာကတော့ သိပ် သဘောမကျလှဘူး။ လေယာဉ်ကွင်းမှာကတော့ လေယာဉ်တွေက တစ်စီးပြီးတစ်စီး ဆိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် လူတွေလည်း တော်တော်များများတယ်။ အကုန်လုံးလည်း တော်တော် အလုပ်ရှုပ်နေပုံပဲ။
လေယာဉ်ကွင်းကနေပြန်တော့ ပထမဆုံး တွေ့ရတာကတော့ လမ်းကျပ်တာပဲ။ ပုံမှန် အချိန်ထက် အိမ်ကို ၁ နာရီ နီးပါးလောက် နောက်ကျပြီးမှ အိမ်ရောက်တယ်။ ပုံမှန် လမ်း မကျပ်ရင် အဲလောက် မကြာပါဘူး။ သို့ပေမယ့် မီးပွိုင့် မိသွားရင်တော့ တော်တော်လေး ကြာတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged myanmar, yangon on March 26, 2013 by saturngod. iOS Bootcamp Day 1
Leaveareply ဒီနေ့ iOS Bootcamp ပထမနေ့တော့ ပြီးသွားပါပြီ။ ဒီနေ့တော့ မနက် ၁၀ နာရီ မှပဲ စဖြစ်တယ်။ လူ စောင့်တာရယ် ပြင်ဆင်နေတာရယ် ၊ XCode သွင်းတာတွေ ကြောင့် ၁၀ နာရီ မှ စဖြစ်တယ်။ ဒီနေ့ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့ Projector မရှိလို့ Bagan က 42 လက်မ TV တစ်လုံးကို ပွဲအတွက် ငှားပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ခုံတွေကိုလည်း ငှားပေးထားတယ်။ ဒါ့အပြင် Bagan က ကိုဇေယျာ နဲ့ အစ်မ သဇင် တို့ တနေကုန် မမောမပန်း နဲ့ သင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် အထူးကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ နေ့လည် စာကိုတော့ Bagan က sponsor လုပ်ပြီးတော့ ထမင်းကြော်နဲ့ ခေါက်ဆွဲကျော် ကွျေးပါတယ်။ ကော်ဖီ နဲ့ ကိုလာ စတာတွေကိုတော့ Revo Tech ကနေ sponsor ပေးထားပါတယ်။ ပွဲအတွက် တနေကုန် အခန်းပေးထားပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ စားစရာ သောက်စရာတွေကို Sponsor ပေးတဲ့ Revo Tech ကိုလည်း အထူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bagan နဲ့ Revo Tech အကူအညီကြောင့် ထင်တာ ထက် ပိုပြီး အဆင်ပြေပြေနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ ပွဲကို တကူးတက လာရောက်ပေးတဲ့ သန့်သက် ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged bootcamp, iOS on March 23, 2013 by saturngod. iOS Bootcamp
3 Replies ကျွန်တော်တို့တွေ iOS Bootcamp ကို အခု လာမယ့် မတ် လ ၂၃ နဲ့ ၂၄ ရက်နေ့မှ လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။ နေရာကတော့ လက်ရှိ Revo Tech မှာပဲ လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ လူ ၁၂ ယောက် ပဲ ကျွန်တော်တို့ သင်ပေးမှာပါ။ အဓိက အခက်အခဲတွေကတော့ နေရာ အခက်အခဲ အချို့နဲ့ သင်ကြားပေးမယ့်သူပါပဲ။ လူ ၃ ယောက်ပဲ ရှိတဲ့ အတွက် ရှေ့က သင်နေရင် နောက်က မသိလိုက်တာတွေကို ပြန်ရှင်းဖို့ နောက်ပြီး error တက်နေတာတွေ ပြန်ရှင်းပေးဖို့အတွက် လူ ၂ ယောက်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူ ၁၂ ယောက် သီးသန့် ပဲ သင်ပါမယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ for loop တို့ if condition တို့ နောက်ပြီး class ဆိုတာဘာလည်း Object ဆိုတာ ဘာလဲ တွေ မသင်ပါဘူး။ Programming အခြေခံ နဲ့ OOP အခြေခံ တို့ကို မသင်တော့ပါဘူး။ ပထမ ၁ ရက်မှာ MVC နဲ့ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်တယ်။ Objective-C ဆိုတာ ဘာ ။ Xcode ဆိုတာ ဘာလဲ။ iOS Controls တွေကို ဘယ်လို သုံးရလဲ ဆိုတာကို သင်ပြီးတော့ ဒုတိယ ရက်မှာ​တော့ app ၂ ခု လောက် အတူတူ ရေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
တကယ်လို့ iOS Bootcamp ကို စိတ်ဝင်စားပြီး Programming နဲ့ OOP အခြေံ ရှိပြီး ရန်ကုန် မှာနေထိုင် တဲ့ သူတွေ အနေနဲ့ http://www.comquas.com/iosbootcamp/ မှာ သွားရောက်ပြီး Register လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ review လုပ်ပြီးသွားရင် တက်ရောက်နိုင်မယ့် သူတွေ ကို အကြောင်း ပြန်ပေးပါမယ်။
Bootcamp မှာ ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီချင်တဲ့ ရန်ကုန်က iOS developer တွေကိုလည်း ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Update: နေရာ အပြောင်း အလဲ ရှိနိုင်သည်။ Revo Tech သို့မဟုတ် MICT Park တွင် ဖြစ်လိမ့်မည်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged bootcamp, iOS on March 5, 2013 by saturngod. Postfix problem with gmail
Leaveareply တော်တော်ကြာပြီ blog ကနေ comment အသစ် mail တွေကော contact တွေ ကော မရောက်လာတာ။ လူက မအားတာနဲ့ သေသေချာချာ လည်း server ကို မစစ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့ညနေ အချိန်ပေးပြီး စစ်ကြည့်တော့ php mail function က အလုပ်လုပ်ပေမယ့် စာက ရောက်မလာဘူး။
ဘာကြောင့် ရောက်မလာတာလဲ ဆိုပြီး postfix ကို ဖြုတ် sendmail တင်။ sendmail နဲ့ စမ်းလည်းမရ။ terminal ကနေ ပို့ကြည့်လိုက်တော့လည်း စာက ထွက်သွားတယ်။ ခက်တာက စာက gmail ထဲကို မရောက်လာဘူးဖြစ်နေတယ်။ နောက်တော့မှ postfix ရဲ့ log ကို စစ်ကြည့်တော့ ဒီလိုတွေ့တယ်။
(connect to alt2.gmail-smtp-in.l.google.com[2607:f8b0:400e:c00::1b]:25: Network is unreachable)
ဆိုပြီး ပြနေတယ်။ ဒါကြောင့် mail တွေ က ရောက်မလာဖြစ်မယ်။ google က spam ရန်က ကာကွယ်လို့ရအောင် security ကို မြှင့်လိုက်တာ ကြောင့် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ postfix နဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကတော့ နောက်နေ့မှာ ရှာကြည့်တော့မယ်။
အခုတော့ wordpress မှာ SMTP plugin သွင်းပြီး PHP Mailer ကို google ရဲ့ SMTP သုံးပြီး ပြန်ပို့ထားတယ်။ အခု စမ်းကြည့်တာကတော့ ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ မတိုင် contact form က ပို့လိုက်တဲ့ စာတွေ အားလုံးကို ကျွန်တော် လုံးဝ မရရှိတဲ့အတွက် အကြောင်းလည်း မပြန်ဖြစ်ပါဘူး။
မေးစရာ မေးခွန်းတွေ ရှိရင်တော့ http://www.mysteryzillion.org မှာပဲ မေးလိုက်ပါ။ ကျွန်တော် နေ့စဉ် ဖြေပေးနေပါတယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing on January 31, 2013 by saturngod. Link
Mobile app တစ်ခု ဖန်တီးတဲ့ အခါမှာ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။ ဘာတွေ သိထားဖို့လိုလဲ ဆိုတာကို ရေးထားတဲ့ post ကောင်းလေးတစ်ခုပါ။ လူငှားပြီး mobile app ရေးခိုင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကုန်ကျနိုင်လဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ အရင်ဖတ်ထားသင့်တဲ့ post ပါ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 January 31, 2013
Leaveareply Don’t copy the code when you learn
1 Reply ဒီနေ့ BackboneJS စာအုပ်ကို ပြန်ဖတ်မိတယ်။ အခုတခေါက်တော့ Exercise တွေကို copy မကူးပဲနဲ့ code တွေ အကုန် အစအဆုံး ပြန်ရိုက်ဖြစ်တယ်။ အဲလို ရိုက်ရင်း နဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလို ရေးရတာလဲ ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အသစ်တွေကို လေ့လာတဲ့ အခါမှာ ချမရေးဖြစ်တာ ကြာပြီ။ အပေါ်ယံလေးပဲ ကြည့်ပြီး ဒါကို ဒီလို ရေးထားတာပါလား ဆိုတဲ့ သဘောလောက်ပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။
ကျွန်တော်တို့ UCSY တက်တုန်းက အခုခေတ်လို iPad တွေ မရှိသလို Ebook Reader တွေ Tablet တွေ လည်း မရှိဘူး။ Internet ကလည်း မရှိတော့ Ebook တွေလည်း လွယ်လင့် တကူမရနိုင်ဘူး။ အများအားဖြင့် စာအုပ်တွေကို Library က ငှားဖတ် ရတာပဲ။ Library ကို ပဲ အားကိုးခဲ့ရတယ်။ စာအုပ် ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် Copy နဲ့ Paste လုပ်မရ။ ဒါကြောင့် အစအဆုံး code တွေ ချရေးပြီး run ကြည့်။ Error တက်ရင် ရေးထားတာ မှားနေလား စစ်ကြည့်။ ရေးထားတာ မှန်ရင် ဘာကြောင့် အလုပ်မလုပ်လည်း လိုက်ရှာ နဲ့ လေ့လာခဲ့ကြတာပဲ။ အခုနောက်ပိုင်း iPad တွေ Android တွေ ခေတ်စားလာတော့ လူတိုင်းနီးပါး စာအုပ် ဖတ်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး Android Tablet တစ်လုံး လောက် ဝယ်နိုင်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စာအုပ်တွေကို Computer ပေါ်မှာ ထက် iPad နဲ့ပဲ ဖတ်ဖြစ်တော့တယ်။ Code တွေကို စမ်းမယ်ဆိုရင်လည်း Ebook က code တွေကို copy and paste လုပ်ပြီး run ကြည့်လိုက်တာပဲ။ run လို့ သူပြောတဲ့ အတိုင်း အလုပ်လုပ်ရင် ရှေ့ဆက်ဖတ်ဖြစ်တယ်။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged learn on January 31, 2013 by saturngod. Ubuntu Phone
Leaveareply Ubuntu Phone ကို CES 2013 မှာ စတင် မိတ်ဆက်ပါတော့မယ်။ Linux လောက မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ Ubuntu က mobile လောက ကို ပါ ဝင်လာပါပြီ။ Native App အတွက် QML နဲ့ ရေးရပြီး HTML web app တွေကိုလည်း support လုပ်ပါမယ်။ နောက်ပြီး push notification ကိုလည်း support လုပ်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော့် အနေနဲ့ကတော့ Ubuntu Desktop နဲ့ တော်တော်လေးကို ဝေးကွာပြီး Ubuntu Server ကိုပဲ အဓိက သုံးဖြစ်တယ်။ Video ကို ကြည့်မှပဲ Ubuntu ဟာ Desktop version မှာလည်း တော်တော် ခရီးရောက်နေပြီး Ubuntu One Cloud ပါ ရှိတယ်ဆိုတာ သိတော့တယ်။ Ubuntu Phone ရဲ့ Design ကတော့ မဆိုးဘူး Desktop ဆန်တယ်လို့ ဆိုရမလိုပဲ။ ထွက်မှာကတော့ 2013 နှစ်ကုန်ခါနီးမှ ထွက်ပါလိမ့်မယ်။ Ubuntu Phone ကို Android run လို့ရတဲ့ Hardware တိုင်းမှာ run လို့ရမယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ လက်ရှိ Mobile လောက မှာ iOS , Android , Windows Phone တို့ကို ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်စောင့်ကြည့် ဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
အခု လက်ရှိ Ubuntu ကို nexus7ပေါ်မှာလည်း တင်ပြီး သုံးလို့ရနေပါပြီ။ https://wiki.ubuntu.com/Nexus7/Installation မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ WebOS ကလည်း Nexus7မှာ run လို့ရပါပြီ။ သို့ပေမယ့် WebOS မှာ App အသစ်တွေ မရှိတော့တာပါပဲ။
Share this:FacebookTwitterGoogle +1 This entry was posted in nothing and tagged Linux, Ubuntu on January 3, 2013 by saturngod. Post navigation
Plan is guessing but it can relieve us. — saturngod Job Vacancy From MZ ForumWe want JAVA Programmer !!!!Seeking volunteers forawordpress.com blogSenior ProgrammerOpen source senior programmer and Project Manager post at Tbit SolutionJOB OPPORTUNITYFreelance to write the project with Java springService Technician (၁) ဦးအလိုရှိသည်IT AdministratorPHP Web Developer (Urgently)Senior Web Front-End Developer ၃ ဦးFacebook Tweets by @saturngod